Menabe: Hapetraka amin’ny fomba ofisialy ny alatsinainy 14 oktobra 2019 ny Governora
dimanche, 13 octobre 2019 16:52
Sary Gasypatriote Morondava
Randriantsoa Mong Wai Tune Serge Lucky no Governoran’i Menabe. Iray amin’ireo Governora miisa iraika ambin’ny folo notendrena nandritra ny filankevitry ny minisitra natao ny alarobia 25 septambra 2019 ity farany.
Ny alatsinainy 14 oktobra 2019 no hametrahana azy ofisialy ho Governoran’i Menabe. Hatao ao amin’ny « Salle d'oeuvre Catholique » ny lanonana mikasika izany, aorian’ny famindram-pahefana eo aminy sy ny lehiben’ny Faritra mpisolo toerana teto Menabe.
Tonga eto Morondava androany 13 oktobra 2019 ny solontenam-panjakana tarihin’ny minisitry ny tanora sy ny fanatanjahantena Tinoka Roberto hanome voninahitra ny lanonana, hotronin'ny solombavam-bahoaka avy ato Menabe.